Miverina ny fangatahana dia fa mbola ambany lavitra noho ny ambaratonga mialoha ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Miverina ny fangatahana dia fa mbola ambany lavitra noho ny ambaratonga mialoha ny COVID
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny famerenana amin'ny laoniny ny dia iraisam-pirenena dia mila governemanta hamerenana amin'ny laoniny ny fahalalahana mandeha - farafaharatsiny farafaharatsiny, mpandeha vita vaksiny dia tsy tokony hiatrika fameperana.
Ny fangatahana fitsangatsanganana an-habakabaka iraisampirenena sy an-toerana dia nampiseho hery lehibe tamin'ny Jolay 2021.
Ny fameperana fitsangantsanganana napetraky ny governemanta dia manohy manemotra ny fanarenana amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ny fitakiana anatiny dia nitontongana 15.6% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) dia nanambara fa ny fangatahana fitsangatsanganana an'habakabaka iraisam-pirenena sy an-toerana dia nampiseho hery lehibe tamin'ny Jolay 2021 raha oharina tamin'ny volana Jona, saingy ny fangatahana dia nijanona lavitra ambanin'ny ambaratonga talohan'ny COVID-19-pandemika. Ny fameperana be dia be napetraky ny governemanta dia mitohy manemotra ny fanarenana amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny valiny 2021 sy 2020 isam-bolana dia voarebirebin'ny fiatraikany tsy manam-paharoa amin'ny COVID-19, raha tsy misy fanamarihana hafa raha tsy amin'ny Jolay 2019 ny fampitahana rehetra, izay nanaraka lamina fangatahana mahazatra.
Ny fitakiana totalin'ny dia an-habakabaka tamin'ny volana jolay 2021 (refesina amin'ny kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na RPK) dia nidina 53.1% raha oharina tamin'ny volana jolay 2019. Fanatsarana lehibe izany hatramin'ny volana jona raha toa ka 60% ambanin'ny haavon'ny jona 2019 ny fangatahana.
Ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena tamin'ny volana jolay dia 73.6% ambanin'ny volana jolay 2019, nanatsara ny fihenan'ny 80.9% voarakitra tamin'ny volana jona 2021 raha roa taona lasa izay. Naneho fanatsarana ny faritra rehetra ary ny kaompaniam-pitaterana avaratra amerikana avaratra dia nampidina ny fihenan'ny RPK iraisampirenena (tsy misy ny angona fifamoivoizana avy any Afrika).
Ny fitakiana anatiny dia nidina 15.6% raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny krizy (Jolay 2019), raha oharina amin'ny fihenan'ny 22.1% voarakitra tamin'ny volana Jona tamin'ny volana Jona 2019. Nandefa ny vokatra tsara indrindra i Russia nandritra ny iray volana, miaraka amin'ny RPKs 28.9% vs. Jolay 2019.
“Ny valin'ny volana Jolay dia hita taratra amin'ny fahazotoan'ny olona handeha mandritra ny fahavaratry ny hemisphere avaratra. Ny fifamoivoizana ao an-toerana dia niverina tamin'ny 85% n'ireo ambaratonga nialoha ny krizy, saingy ny fangatahana iraisam-pirenena dia vao tafarina tamin'ny ampahefatry ny volan'ny 2019 ihany. Ny olana dia ny fepetra fanaraha-maso ny sisintany. Ny fanapahan-kevitry ny governemanta dia tsy entin'ny data, indrindra ny mahomby amin'ny vaksinina. Nandehandeha tany amin'izay azony natao ny olona, ​​ary izany dia tamin'ny tsena anatiny indrindra. Ny famerenana ny dia iraisam-pirenena dia mila governemanta hamerina ny fahalalahana mandeha. Farafaharatsiny farafaharatsiny, ireo mpandeha vaksiny dia tsy tokony hiatrika fameperana. Izany dia handeha lavitra amin'ny fampifandraisan'izao tontolo izao sy ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ", hoy izy Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.